Sex Education, What Do Today's Children Really Need To Know - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Sex Education, What Do Today’s Children Really Need To Know
ယနခေ့တျေကလေးတှေ သခြောသိထားသငျ့တဲ့ လိငျပညာပေးခွငျးဆိုတာ
လိငျပညာပေးနဲ့ ပတျသကျရငျ ကလေးမိဘတှေ သိလိုတာတှေ အမြားကွီးရှိတတျပါတယျ… ဘယျလို စရမလဲ… ဘယျတော့ စပွောရမလဲ… ဘာပွောရမှာလဲ ဆိုတာတှေ အပါအဝငျ ပေါ့
တကယျတော့ လိငျပညာပေးရေးဆိုတာ ကလေးတှအေတှကျ တကယျလိုအပျပါတယျ..
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သငျမပွောလဲ သငျ့ကလေးဟာ လိငျနဲ့ပတျသတျလို့ သူ့ရှယျတူ သူငယျခငျြးတှဆေီကပဲ ဖွဈဖွဈ…. internet က ဖွဈဖွဈ…. ရုပျမွငျသံကွားတှကေ တဆငျ့ဖွဈဖွဈ တခြိနျမဟုတျတခြိနျမှာ သိသှားမှာမို့လို့ပါပဲ
ပညာရှငျတှလေလေ့ာမှူအရတော့ လိငျပညာပေးကောငျးကောငျးသငျကွားခံထားရတဲ့ကလေးတှဟော… တခြိနျမှာ လိငျကိစ်စ စတငျခြိနျနောကျကလြရှေိ့ပွီး စတငျတဲ့အခါမှာလဲ….. မလိုခငျြတဲ့ ကိုယျဝနျအပါအဝငျ လိငျကတဆငျ့ ကူးစကျရောဂါတှဖွေဈနိုငျတဲ့ အန်တရာယျနညျးပါးတာကို တှရေ့ပါသတဲ့….
အောကျမှာပွောပွမှာကတော့ သငျ့ကလေးကို အသကျအရှယျအပိုငျးအခွါးအလိုကျ လိငျပညာပေးနညျးပုံစံတှပေဲ ဖွဈပါတယျ…..
– ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှရေဲ့ နာမညျတှေ ဥပမာ… ကြားလိငျတံ မအဂျါ စသဖွငျ့
– ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှရေဲ့ လုပျငနျးဆောငျတာတှေ… ဥပမာ… ဆီးဟာ ကြားလိငျတံ ကတဆငျ့ ဒါမှမဟုတျ မအဂျါကတဆငျ့ထှကျတယျ…. အီအီးက စအိုကနတေဆငျ့ ထှကျတယျ
– တကယျလို့မြား အဝတျမပါဘဲ နရေတာကို သငျ့ကလေးက ကွိုကျနတေယျ ဆိုရငျ အဝတျမပါဘဲ မနသေငျ့တဲ့နရောတှရှေိကွောငျး ပွောပွပေးပါ… ဥပမာ ပနျးခွံလိုနရောမြိုး
-ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတှရေဲ့ နာမညျအမှနျတှနေဲ့ လုပျငနျးဆောငျတာတှေ
-ကြားနဲ့ မ မတူကှဲပွားကွောငျး
– တခြို့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှဟော သီးခွားထားရမှာဖွဈကွောငျး… private parts တှဖွေဈကွောငျး…
– တခွားသူတှရေဲ့ လှတျလပျခှငျ့ ဒါမှမဟုတျ privacy ကိုလေးစားတတျဖို့… ဥပမာ… ရခြေိုးခနျးတံခါးစထေ့ားရငျ ခေါကျပွီး ဝငျခှငျ့တောငျးပွီးမှ ဝငျသငျ့ကွောငျး
– ကိုယျ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှကေို လူရှသေူ့ရှမှေ့ာ အကွာကွီးထိကိုငျနဖေို့မသငျ့ကွောငျး
-တကယျလို့ သငျ့ကလေးက လူတှဘေယျလိုဖွဈလာသလဲ မေးခဲ့ရငျ ကြားရဲ့မြိုးစနေဲ့ မမြိုးစတေို့ပေါငျးပွီး အမြိုးသမီးရဲ့ ဗိုကျထဲမှာ ကွီးထှားလာကွောငျး… မြိုးလမျးကွောငျးကနေ အခြိနျတနျတဲ့အခါ ထှကျလာကွောငျး ပွောလို့ရပါတယျ
– ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးတှေ နဲ့ မြိုးပှားအဂျါတှအေကွောငျးကို ပိုပွီးပွညျ့ပွညျ့စုံစုံပွောလို့ရပါပွီ
– မကွာခငျ အရှယျရောကျ ကွီးကောငျဝငျလာတော့မယျ့အကွောငျးနဲ့ ဒါက ပုံမှနျ သဘာဝသာဖွဈကွောငျး
– တစုံတယောကျက လိငျပိုငျးဆိုငျရာ မမှနျကနျတဲ့ပုံစံမြိုးလုပျခဲ့ရငျ “သားသား ဒါကိုမကွိုကျဘူး… မလုပျပါနဲ့ ” စသဖွငျ့ ငွငျးရမှာ ဖွဈတဲ့အကွောငျး
– မိနျးကလေး တှကေို ဓမ်မတာ လာခွငျးနဲ့ပတျသကျလို့ သခြောပွောပွ ပွငျဆငျပေးထားရပါမယျ
– ယောကျကြားလေးတှကေိုတော့ သုတျလှတျခွငျးနဲ့ ညအိပျရာဝငျ အိပျမကျတှအေကွောငျး
– အရှယျရောကျပွီးသူတှရေဲ့ ကြားအဂျါနဲ့ မလိငျအဂျါ အတူပေါငျးစပျပွီး အရညျထုတျလိုကျတာနဲ့ ကလေးရသှားနိုငျတဲ့အကွောငျး
– လိငျကတဆငျ့ ကူးစကျတတျတဲ့ရောဂါတှအေကွောငျး
– ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ အရှယျရောကျပွီး စိတျရောကိုယျပါ အဆငျသငျ့ဖွဈပွီး သခြောကွီးပွငျးပွီးပါမှ safe sex လို့ချေါတဲ့ အန်တရာယျကငျးတဲ့ လိငျဆကျဆံခွငျးကို စတငျသငျ့ကွောငျး
– တခြို့ကလေးတှဟော ဒီအရှယျမှာ mastubation လုပျတတျကွပါတယျ… တကယျလို့ သငျ့ကလေး ဒီလိုလုပျနတောကို သငျမွငျခဲ့ရငျ ဒါကို အခုရပျဖို့နဲ့ နောငျကို လူမွငျနိုငျတဲ့နရောအခြိနျမြိုးမှာ ဘယျတော့မှ မဖွဈစဖေို့ သတိပေးပါ
တကယျတော့ လိငျပညာပေးရေးဆိုတာ မိဘတှအေတှကျ ခကျခဲပွီး ကို့ရို့ကားယားဖွဈနနေိုငျပါတယျ… ဒါပမေယျ့ ဒါကသငျ့ကလေးနဲ့အတူ ကောငျးမှနျစှာကြျောလှားနိုငျဖို့ နညျးလမျးတှကေို ရှာဖှဆေောငျရှကျခွငျးက အကြိုးကြေးဇူး အမြားကွီး ဖွဈထှနျးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ
ယနေ့ခေတ်ကလေးတွေ သေချာသိထားသင့်တဲ့ လိင်ပညာပေးခြင်းဆိုတာ
လိင်ပညာပေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကလေးမိဘတွေ သိလိုတာတွေ အများကြီးရှိတတ်ပါတယ်… ဘယ်လို စရမလဲ… ဘယ်တော့ စပြောရမလဲ… ဘာပြောရမှာလဲ ဆိုတာတွေ အပါအဝင် ပေါ့
တကယ်တော့ လိင်ပညာပေးရေးဆိုတာ ကလေးတွေအတွက် တကယ်လိုအပ်ပါတယ်..
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်မပြောလဲ သင့်ကလေးဟာ လိင်နဲ့ပတ်သတ်လို့ သူ့ရွယ်တူ သူငယ်ချင်းတွေဆီကပဲ ဖြစ်ဖြစ်…. internet က ဖြစ်ဖြစ်…. ရုပ်မြင်သံကြားတွေက တဆင့်ဖြစ်ဖြစ် တချိန်မဟုတ်တချိန်မှာ သိသွားမှာမို့လို့ပါပဲ
ပညာရှင်တွေလေ့လာမှူအရတော့ လိင်ပညာပေးကောင်းကောင်းသင်ကြားခံထားရတဲ့ကလေးတွေဟာ… တချိန်မှာ လိင်ကိစ္စ စတင်ချိန်နောက်ကျလေ့ရှိပြီး စတင်တဲ့အခါမှာလဲ….. မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်အပါအဝင် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်နည်းပါးတာကို တွေ့ရပါသတဲ့….
အောက်မှာပြောပြမှာကတော့ သင့်ကလေးကို အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြါးအလိုက် လိင်ပညာပေးနည်းပုံစံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်…..
– ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ နာမည်တွေ ဥပမာ… ကျားလိင်တံ မအဂါ် စသဖြင့်
– ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ… ဥပမာ… ဆီးဟာ ကျားလိင်တံ ကတဆင့် ဒါမှမဟုတ် မအဂ်ါကတဆင့်ထွက်တယ်…. အီအီးက စအိုကနေတဆင့် ထွက်တယ်
– တကယ်လို့များ အဝတ်မပါဘဲ နေရတာကို သင့်ကလေးက ကြိုက်နေတယ် ဆိုရင် အဝတ်မပါဘဲ မနေသင့်တဲ့နေရာတွေရှိကြောင်း ပြောပြပေးပါ… ဥပမာ ပန်းခြံလိုနေရာမျိုး
-ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ နာမည်အမှန်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ
-ကျားနဲ့ မ မတူကွဲပြားကြောင်း
– တချို့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ သီးခြားထားရမှာဖြစ်ကြောင်း… private parts တွေဖြစ်ကြောင်း…
– တခြားသူတွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ဒါမှမဟုတ် privacy ကိုလေးစားတတ်ဖို့… ဥပမာ… ရေချိုးခန်းတံခါးစေ့ထားရင် ခေါက်ပြီး ဝင်ခွင့်တောင်းပြီးမှ ဝင်သင့်ကြောင်း
– ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို လူရှေ့သူရှေ့မှာ အကြာကြီးထိကိုင်နေဖို့မသင့်ကြောင်း
-တကယ်လို့ သင့်ကလေးက လူတွေဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ မေးခဲ့ရင် ကျားရဲ့မျိုးစေ့နဲ့ မမျိုးစေ့တို့ပေါင်းပြီး အမျိုးသမီးရဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ ကြီးထွားလာကြောင်း… မျိုးလမ်းကြောင်းကနေ အချိန်တန်တဲ့အခါ ထွက်လာကြောင်း ပြောလို့ရပါတယ်
– ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ နဲ့ မျိုးပွားအဂ်ါတွေအကြောင်းကို ပိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောလို့ရပါပြီ
– မကြာခင် အရွယ်ရောက် ကြီးကောင်ဝင်လာတော့မယ့်အကြောင်းနဲ့ ဒါက ပုံမှန် သဘာဝသာဖြစ်ကြောင်း
– တစုံတယောက်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မမှန်ကန်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ခဲ့ရင် “သားသား ဒါကိုမကြိုက်ဘူး… မလုပ်ပါနဲ့ ” စသဖြင့် ငြင်းရမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း
– မိန်းကလေး တွေကို ဓမ္မတာ လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ သေချာပြောပြ ပြင်ဆင်ပေးထားရပါမယ်
– ယောက်ကျားလေးတွေကိုတော့ သုတ်လွှတ်ခြင်းနဲ့ ညအိပ်ရာဝင် အိပ်မက်တွေအကြောင်း
– အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေရဲ့ ကျားအဂ်ါနဲ့ မလိင်အဂါ် အတူပေါင်းစပ်ပြီး အရည်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ ကလေးရသွားနိုင်တဲ့အကြောင်း
– လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေအကြောင်း
– ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အရွယ်ရောက်ပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး သေချာကြီးပြင်းပြီးပါမှ safe sex လို့ခေါ်တဲ့ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို စတင်သင့်ကြောင်း
– တချို့ကလေးတွေဟာ ဒီအရွယ်မှာ mastubation လုပ်တတ်ကြပါတယ်… တကယ်လို့ သင့်ကလေး ဒီလိုလုပ်နေတာကို သင်မြင်ခဲ့ရင် ဒါကို အခုရပ်ဖို့နဲ့ နောင်ကို လူမြင်နိုင်တဲ့နေရာအချိန်မျိုးမှာ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်စေဖို့ သတိပေးပါ
တကယ်တော့ လိင်ပညာပေးရေးဆိုတာ မိဘတွေအတွက် ခက်ခဲပြီး ကို့ရို့ကားယားဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ဒါကသင့်ကလေးနဲ့အတူ ကောင်းမွန်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေဆောင်ရွက်ခြင်းက အကျိုးကျေးဇူး အများကြီး ဖြစ်ထွန်းမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
Dangers Of Convenience Food, Fast Food and Junk Food